Bog la yaab leh oo dhalinyaradda loogu talagalay oo dowladda hirgelisay | Somaliska
Bogg la sheegay in laga helayo macluumaad xasaasi ah oo noloshadda ku saabsan ayaa dayaqaadii toddobaadkii ina dhaafay daaha laga roggay. Boggan oo lugu magac darray Youmo, ayaa ah bogg ay maamulaan hey’adaha goboladda iyo degmooyinka ee dalkaan Iswiidhan.
Haddaba muxuu bogganni yahay?, Boggan oo ah mid u dhigma ama u shaqeenaya sida xarrumaha dhalinyaradda lugu qaabilo ee ungdomsmottagning, ayaa waxaa ku keeydsan macluumaad qaarkood ay aad xasaasi u yihiin. Waxaa haatan boggaasi ku daaban luqado kala duwan oo afka soomaaliga ka mid yahay.
Dowladda dalkaan Iswiidhan oo boggan maalgelisay ayaa sheegtay inuu yahay bogg xambsaarsan macluumaad badan oo dhalinyaradda ku saabsan, halkaas oo kala socdaan karaan sax iyo qalad. Haweeneyda wasiirka sinaanta iyo waayeeladda u qaabilsan dalkaan Iswiidhan oo la hadleeysay idaacadda Iswiidhan ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in dhalinyaraddu ka qeeyb qaataan maclumaadkan si aaney beey tiri khalad amba wax dembi ah u gelin. Waxeey farta ku fiiqday muhiimadda ay leedahay sinaanta u dhaxeeysa labadda jinsi gaar ahaan kolka ay dhacdo in ay fal gal sameeyaan taas ah mid ay raali iskaga yihiin labada dhinac.
Waa markii ugu horeeysay oo bogg noocan ah la sameeyo. Waxaana looga gol leeyahay in dhalinyaradda da’doodu u dhaxeeyso 13 jir ilaa 25 ay kala socdaan macluumaad ku saabsan jirk, galmada, maandooriyaha, caafimaadka iyo sinnaanta.